रोकिएको विमानमा रातभर यात्रु राखिनु ‘अपराध’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← टेन्टले धान्ला हुरी र पानी ?
पौडेल समूहले कुरा फेर्‍यो, भाग नपाएपछि सिटौला समूहलाई तनाव →
काठमाडौं : सामान्य परिस्थितिमा कुनै पनि जहाज निर्धारित तालिकाभन्दा कति ढिला (डिले) हुन सक्छ ? यदाकदा एक–दुई मिनेट। कतार, थाईजस्ता प्रतिष्ठित एयरलाइन्स त सेकेन्ड पनि ढिला गर्दैनन्। डिले भए कर्मचारी कारबाहीमा पर्छन्।नेपाल एयरलाइन्सका लागि भने डिले सामान्य मानिन्छ। अझ निर्धारित समयभन्दा ४५ मिनेट ढिलासम्म उड्न नसकेर भएको ठूलो क्षतिमा उसले अरू निकायलाई दोष दिएर पन्छिने गरेको छ। गत मंगलबार बेलुकी समयमा दुबई नउडाएर धावनमार्ग बन्दले विमान रोकिएको विषयलाई उड्ययन क्षेत्रमा ‘गम्भीर अपराध’ का रूपमा लिइएको छ। सबैभन्दा ठूलो बदमासी त यात्रुलाई रातभर विमानमै थुनिएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग नयाँ कालोपत्र गर्न तीन महिनाका लागि दैनिक १० घन्टा बन्द गरिएको छ। त्यसका लागि तीन महिनाअघि नोटाम जारी गरिएको थियो। नोटाम अर्थात् नोटिस टु एयरमेन (उड्डयनकर्तालाई सूचना) विमानस्थलमा हुने अवरोध’bout सार्वजनिक आह्वानबाट दिइने पूर्वजानकारी हो। यही आधारमा सम्बन्धित विमानस्थालमा उडान भर्ने विभिन्न मुलुकका विमानले तालिका मिलाउँछन्।
धावनमार्ग पुर्निर्माण चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजीले गरिरहेको छ। समयमा कुनै हालतमा सक्ने ऊसँग सर्तनामा गरिएको छ। स्रोत भन्छ, ‘त्यसका लागि उसले दैनिक १० घन्टा पूरापूर काम गर्न पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ। ‘एक मिनेट रोक्यो भने उसले बहाना पाउँछ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले नोटाममा पूर्ण प्रतिबद्ध रहने सरकारको नीति छ।’(अन्नपूर्ण )